🥇 ▷ Pixel 3 cusub wuxuu sii wadaa dabaasha meelaha fog fog ee koodhka Android ✅
Pixel 3 cusub wuxuu sii wadaa dabaasha meelaha fog fog ee koodhka Android
Kuwa ugu xiisaha badan ee idinka mid ah ayaa ogaan doona sida Google ugu raaxayso gelinta magacyada ‘codenames’ ee uu soo saaray magaca qofka noocyada kalluunka casriga casriga ah ee aad soo saartay. Pixel 3-ka cusub maahan wax laga reebi karo, taa bedelkeed, waxay ku faanaan diiwaangelinta aragtida ugu horeysa, maadaama laga helay koodhka Android xitaa Oktoobar 2017, maalmo kadib markii la bilaabay suuqa suuqa kuwii ka horreeyay ee Pixel 2.
Bilowgii waxaa jiray saddex, taasi waa isweydaarsiga, qaab-dhismeedka waa albacore, si kastaba ha noqotee, raadadkii ayaa dhaqso loo lumay, halka isweydaarsiga waa qaab-dhismeedka waxay si tartiib tartiib ah u muujiyeen naftooda yar iyo xishood yar. Xitaa dhawaan waa ay ahaayeen lagu arkay AOSP, shaqsiyan iyo si wada jir ahba, si dheeraad ah u xaqiijinta fikirka ah in ay si sax ah u tahay magacyada code ee Pixel 3 iyo Pixel 3 XL – isha waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaasha tixraacyadii ugu dambeeyay ee koodhka.
AKHRISO: Android P: laba ka mid ah howlaha xiisaha leh waxay ka baxsan yihiin kuwa Pixel 2 iyo 3
Haatanse, Google wuxuu ku fiicnaa inuu ilaaliyo keyd ku saabsan astaamaha labada aaladaha. Naqshaddu muddo dheer ma lahayn wax sir ah, laakiin ilaa iyo qalabka iyo barnaamijyada la yaabka leh ee Big G uu innaga haysto, ayaan wali mugdi ku jirnaa. Xitaa ma cada chi labada isweydaarsiga iyo yaa qaab-dhismeedka, in kasta oo aad eegtid cabirka kalluunka, qaab-dhismeedka u muuqan lahaa kan ugu weyn, sidaa darteed ugu weyn ee looga shakisan yahay inuu yahay Pixel 3 XL. Waxaan hubnaa, si kastaba ha noqotee, in sirtu sii jiri doonto.
Via: Droid-LifeXigasho: AOSP (1), (2), (3)